Ikhaya IFOOTBALL ELITE UMichel Platini Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba ephelele ye-Football Elite eyaziwa kakhulu ngesiteketiso "The King". I-Michel Platini Ingane Yethu Indaba kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sokubantwana kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, isizinda somndeni, ukuphila komshado, kanye nezinye izinto eziningi ezingekho (okungaziwa) ngaye.
Indaba yethu ye Micheal Platini ingenye into ethakazelisayo eyenzeka ekuhambeni kokuvuka kwakhe ekudumeni kuya ekudumeni kanye nokuphela kokudabukisayo kwenqubekela phambili ayeyenza eminyakeni. Manje ngaphandle kokuqhubeka kwe-ado, ake siqale.
Michel Platini Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Isiqalo sokuphila
UMichel François Platini wazalwa ngoJuni 21 ngoJuni 1955 eJoeuf, eFrance. Uzalwe nguyise, u-Aldo Platini owayengumqeqeshi nomqeqeshi webhola lezemidlalo ngesikhathi ezalwa. Ngakolunye uhlangothi, umama kaMichel, u-Anna Platini wayeyibhande leBar des Sportifs elihumusha njengebhola lezemidlalo. Isizinda semindeni esiphakathi kwabazali bakhe siphakamisa isiqalo esithobekile sikaMichel.
Ukukhula emndenini ophakathi kwamancane uMichel - njengabantwana abaningi besikhathi sakhe - wathatha ukubandakanya kwezemidlalo oyithandayo, ibhola lezemidlalo futhi wavunyelwa ukudlala ibhola lomgwaqo etafuleni elincane.
Akubanga nje isikhathi eside ngaphambi kokuba athandwe phakathi kontanga yakhe futhi wamukela isiteketiso sakhe sokuqala nesingenasiphithiphithi "Peleatini"Ekuqapheliseni ukudunyiswa kwakhe ngenxa yokuziqhenya kwakhe kwasekuqaleni.
Okuphawulekayo phakathi kwamakhono ebuntwaneni ayenawo kwakungamandla akhe okududuza amahlumela ebhola abomakhelwane edolobheni lakubo abhekwa njengosongo empilweni nasezindlini.
Michel Platini Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuhlukumeza Inhliziyo Ebuthakathaka
Noma kunjalo, uMichel wayenomuzwa wokuthi yiliphi ibhola elitholakalayo esitokisini futhi wenza konke okusemandleni akhe emdlalweni. Ngemuva kokuthola iminyaka eminingi emdlalweni webhola lezemidlalo, uMichel ubeke izitimela zokuzibandakanya kwezobuchwepheshe kwiCom Metz kodwa wenqatshwa yiqembu elingazange libheke njengalokhu lihluleka ukudlala ibhola ngokusola ukuba inhliziyo ebuthakathaka.
Encane futhi efuna ukuthanda, uMichel wayengeyena umuntu ozovumela ithuba lokudlula eminwe yakhe. Uphikisana nokunqatshwa kwakhe yiqembu futhi wanikezwa ithuba lokufakazela ukuqina kwakhe hhayi emkhakheni wokudlala kodwa ngokushaya emoyeni emshinini oqhutshwa udokotela ocebile owenziwa yiC FC Metz.
Engathandi ukunikeza ithuba, uMichel uzinikeze ukuhlolwa okungaphezu kokusemandleni akhe futhi waphazamisa imizuzu embalwa kamuva, intuthuko udokotela awuthathe njengesiqiniseko sokuthi udlamekile futhi ulungele ukulahlwa.
Michel Platini Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Umsebenzi we-Buildup
Ehlukumezekile, ephahliwe kodwa engapheli, uMichel wathatha izingcezu zokuphila kwakhe futhi wanikeza ibhola lochwepheshe elinye ibhola esikhwameni wayeqiniseka ukuthi uyakwamukelwa njengoba inhliziyo yakhe ebuthakathaka ayikwazi ukumelana nokunye ukwenqatshwa.
Yikuphi amanye amakilabhu angase aqiniseke ngaphezu kwalokho NJENGOBA Nancy lapho ubaba wakhe esebenze njengelungu le-football club yokuphatha?.
Njengoba izinto zizovela emuva, ukuhlolwa okungalungile kwamaphaphu weDkt Metz club kwaba yinhlanhla emakhelwane abadlali beqembu le-AS Nancy Lorraine lapho uMichel abeka khona imidlalo emangalisayo eyamenza waba umdlali ovelele noma iqembu elibheka.
Michel Platini Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphakama Ekudumeni
Kwaku-AS Nancy ukuthi uMichel ube nomakhono omuhle wokudlula nokukhishwa kwamahhala, kanye namakhono okuqedela okulungile, ukufaka imigomo ye-98 emidlalweni yeligi le-181. Eminyakeni eyi-21, uMitchel wenza iqembu lakhe laseFrance kuqala lapho amanye amaqembu kaZwelonke ikakhulukazi eCzech ayehlushwa khona.
Amagagasi okuthiwa udumo afika ekuhlambeni lapho uMichel engumdlali e-Juventus (emva kokuphenya okuphumelelayo e-Saint Etienne) wathola umgomo nokuwina umdlalo ngokumelene neLiverpool owabona uhlangothi lwakhe lwakhipha i-European Cup. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Michel Platini Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukuphila ubuhlobo
Kukhona owesifazane oyedwa kuphela endabeni yothando lukaMichel Platini futhi uba ngumkakhe uChristelle Bigoni.
UMichel usaqhubeka edlala i-AS Nancy lapho ehlangana nomkakhe uChristelle, owayengumfundi wesayensi yezemvelo. Wayeyithandana futhi ethandana futhi akalokothi abe namahloni ekuboneni nomyeni wakhe ku-tracksuit yakhe ehlukahlukene.
Lo mbhangqwana ushadile ku-1977 futhi usuhlale ushada kusukela ngaleso sikhathi.
Inyunyana yabo ibusiswe ngezingane ezimbili, uLaurent Platini kanye ne-marine Platini.
Michel Platini Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Inhlekelele yeHighsel Stadium
Inkundla yeHaversel yinto ephikisana phakathi kwabalandeli bakaLiverpool noJuventus, okwakubona ukuthi leli cala libheke odongeni olwakhona kamuva. Isenzakalo esibuhlungu senzeke ngomhla ka-29th ka-May 1985, saholela ekufeni kwabantu abangu-39-ikakhulukazi amaNtaliyane nabalandeli be-Juventus- ngenkathi abanye abangu-600 balimala.
Le mpikiswano eyenzeka ngosuku olufanayo kanye nendawo lapho uMichel Platini azuze khona umqeqeshi weLiverpool, ukushaya imoto yaseYurophu, kwenza abaningi bacatshangelwe ukuthi uMichel Platini akafuni ukugubha umgomo wakhe wokuwina, naphezu kokulahlekelwa yilelo suku.
Michel Platini Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -I-Post-Professional Football Endeavors
UMichel Platini washiya umqeqeshi wezemidlalo ngesikhathi eseneminyaka engu-32 ngoJune 1987. Ezinyangeni ngemuva kokuthatha umhlalaphansi, wathatha umsebenzi wokuqeqesha njengomqondisi weFrance National side ku-1988 futhi wabona iqembu lakhe lifanelekela i-1992 European Championship kanye nerekhodi elihlaba umxhwele lokuwina wonke amathikithi akhe ayisishiyagalombili.
Phakathi kuka-1988 kuya ku-2006 Michel ujoyine i-UEFA ne-FIFA, ekhonza ngaphansi kwamakomidi ahlukene kuze kube yi-2006, ephikisana noLennart Johansson futhi ehlule isikhundla sikaMengameli we-UEFA.
Isikhundla sikaMengameli wePlatinini sagcina iminyaka engu-8, izinsuku ezingu-255, isikhathi esasihluke kakhulu eminyakeni engu-16 yokuhlala kwakhe ngaphambi kukaLennart Johansson. Yini eyayingenza inhlakanipho yaseFrance ifinyeze isikhathi sakhe njengomengameli we-UEFA; isifuba noma isidingo ?.
Michel Platini Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ukubandakanya Ukubandakanya Okulimazayo
Platini wayeyintandokazi yokufaka esikhundleni somengameli weFIFA ngaleso sikhathi, u-Sepp Blatter owasula ku-2015, kodwa i-duo (Platini noBlatter) batholakala enecala lokusola, ukuphathwa kabi, ukungqubuzana kwezintshisekelo, ukubalwa kwamanga nokungahlanganyeli nekomidi lokuziphatha kweFIFA.
Ukuthuthukiswa kwaqeda isiphakamiso sikaMengameli wePlatinini (njengoba anikezwe ukuvinjelwa kwe-8 ngonyaka emuva kwebhola eliye lahliswa iminyaka engu-6), unikezela uGianni Infantino ophikisanayo futhi wanqoba isikhundla esikhethekile. Lokhu kwaholela ekubeni ashiye isikhundla sakhe njengoMengameli we-UEFA ngemuva kokuhluleka ukuvinjelwa kweminyaka eyisithupha ebhola lebhola.
Michel Platini Childhood Indaba Plus Untold Biography Amaqiniso -Ezinye Amaqiniso
Ukuthutha kukaPlatinini kuJuventus ehlobo lika-1976 kwakungeke kusekelwe enkontileka kodwa imali ekhethiwe njengomthetho ngamunye waseFrance ngaleso sikhathi.
Ufeze umdlalo ongajwayelekile ongavela emazweni amabili emidlalweni yamazwe ngamazwe. (I-France ne-Kuwait)
Ungumnqobi wesikhathi esine-Ballon d'Or. Lokhu kwenzeka eminyakeni; I-1983, i-1984 ne-1985.
Ube kade Zinedine Zidane ebuntwaneni isithombe.
Ngesikhathi sakhe njengomphathi webhola, wayephikisana kakhulu nokudluliswa kwabadlali abangaphansi kwe-18, ayibheka njengendlela engekho emthethweni yokuhweba ingane.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda i-Michel Platini Childhood Story kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Ku-LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.